လူငယ်တွေမေးဖို့မေ့နေတဲ့ Why, How, What နဲ့စတဲ့မေးခွန်းများ – Live the Dream
လူငယ်တွေမေးဖို့မေ့နေတဲ့ Why, How, What နဲ့စတဲ့မေးခွန်းများ
ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာတော့ Why, How, What ဆိုတဲ့ Golden Cycle အကြောင်းကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြပါတယ်။ Why- လုပ်ငန်းတစ်ခုက ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ကိုင်နေတယ်? How- ဘယ်လို နည်းစနစ်တွေနဲ့ လည်ပတ်နေတယ်? What- ဒါတွေလုပ်နေတယ်။ ဒီလို Products တွေရနိုင်တယ်? စသည်ဖြင့် လူအများကိုသိစေနိုင်ဖို့ မိမိတို့လုပ်ငန်းအကြောင်းကို ဖော်ပြကြပါတယ်။ ဒီသုံးချက်ထဲက ဘယ်အရာက အရေးကြီးဆုံးလဲ? ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာရော Why, How, What ကိုဘယ်လိုအသုံးချနိုင်မလဲ?
ဒီတစ်ပုဒ်ကတော့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို နှိုင်းယှဉ် ဥပမာယူပြီး လက်တွေ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ဘဝပြသနာကိုတွေမှာ အသုံးချဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒါ‌ေ့ကြောင့် ဗဟုသုတလည်းရ ဆက်စပ်တွေးစရာလည်းဖြစ်ဆိုတော့ မုန့်စားရင်း လှည်းစီးပေါ့ဗျာ..
၁။ ဈေးကွက်စနစ်ရဲ့ “Why, How, What”
ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ကွဲပြားစွာတည်ဆောက်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအတိုင်း၊ လုပ်ငန်းတွေတိုင်းမှာ why, how , what ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ ထုတ်ကုန်တွေ ရှိပါတယ်။ အချက်သုံးချက်တွေထဲက why ဆိုတဲ့အရာကို လူတွေပိုသိစေဖို့ ဦးတည်လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ရည်ရွယ်ချက်ခိုင်မာစွာပြဆိုနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုက လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ပိုမို ကောင်းမွန်အောင်မြင်ပြီး တစ်ခြားသော လုပ်ငန်းတွေထက် တစ်ခြားသောထုတ်ကုန်တွေထက် လူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကို ရရှိကြပါတယ်။ Steve Jobs ရဲ့ Apple ကုမ္ပဏီကို ဥပမာရှုကြည့်ပါ။
Steve Jobs ကိုယ်တိုင် Apple ကုမ္ပဏီမှာ နည်းပညာအပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုလုပ်မယ်၊ နည်းပညာနဲ့ လူတွေကို တားဆီးထားတဲ့ အရာ တွေကို ဖယ်ပစ်မယ်၊ လူတိုင်းကွန်ပြူတာသုံးနိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေရှိခဲ့သလို အမှန်တကယ်လည်း လူတွေကို အပြောင်းအလဲများစွာ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုထိလည်း Apple products တွေက အရေအတွက်ထက် အရည်အသွေးပိုင်းကို ပိုမိုဦးစားပေးသလို ထူးခြားတဲ့နည်းပညာတွေသုံးထားတယ်။ အချိန်ယူပြီးမှ အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကို လူတွေဆီချပြတယ်။ဒါ့ကြောင့် ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ရင် Apple Products ကို ဝယ်သုံးချင်ကြပါတယ်။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်း Apple ရဲ့ အသစ်အသစ်တွေကိုတော့စောင့်မျှော်နေကြတုန်းပါပဲ။ ပြန်တွေးကြည့်ရင် သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကောင်းခဲ့တယ်၊ ကိုယ်ပိုင်နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ သွားတယ်၊ အရည်အသွေးမှီ ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်ပေးတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်လို့လား?။ ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်.
၂။ Why- ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ?
လူသားပီပီ စိတ်ဆန္ဒရဲ့တွန်းအားပေးမှုနောက်လိုက်ပြီး အကျိုးဆက်အကောင်းအဆိုးကို မတွေးပဲ ရည်ရွယ်ချက်တိတိပပ မရှိ လုပ်မိခဲ့တဲ့အရာတွေရှိကြပါတယ်။ ဘာမျှမစဉ်းစားပဲစိတ်သဘောအတိုင်းလိုက်ပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေက အဆိုးတွေချည်းမဟုတ်ပေမယ့် လုပ်ရပ်တစ်ခုစီတိုင်း ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးရှိဖို့လိုပါတယ်။
ပညာရပ်လေ့လာခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာကြောင့်လုပ်ရလဲ? ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ခိုင်မာစွာတည်ရှိနေခြင်းက အဆင်ပြေချိန်သာမက အထူးသဖြင့် ကျရှုံးနေချိန်မှာ တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်စေမှာပါ။ မကောင်းမသင့်တဲ့အရာတွေ၊ အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေရင်လည်း ဘာကြောင့်လုပ်ရလဲ? ဆိုတာကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်နိုင်ခြင်းက လမ်းပျောက်ကျရှုံးခြင်းတွေကနေ လွှတ်မြောက်နိုင်တဲ့လမ်းစတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါ။ So..Don’t forget why you do these. ဘာကြောင့်ဒါတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာသိခြင်း၊ ဆင်ခြင်နိုင်ခြင်းက မိမိရဲ့ဂုဏ် မြင့်တင်ဖို့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ How – ဘယ်လိုသွားကြမလဲ?
ကိုယ့်မှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက သူမတူတဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ လူတွေကြိုက်နှစ်သက်အောင် ဘယ်လိုချပြလဲ?ဆိုတာမျိုးလိုပေါ့။ ကိုယ့်မှာလည်းသူများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်တွေ၊ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေရှိနေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်တွေ၊ တန်ဖိုးတွေကို ထည့်တွက်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာလမ်းကြောင်းများကို ဖောက်၊ ကိုယ့်ပိုင် Strategy နဲ့သွားပြီး ကိုယ်တိုင် brand တစ်ခု တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝဇာတ်ခုံအမျိုးမျိုးမှာ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကွာခြားတာကြောင့် သူများခုန်တိုင်း လိုက်ခုန်နေတာ၊ သူများသွားတိုင်းလိုက်သွားနေတာက ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူများလမ်းကြောင်းတွေထဲမှာ ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေတုန်းဆိုရင် ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေပြန်လည်တည်ဆောက်၊ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်ကြပါ..
၄။ What- ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ?
ဘာမျှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော့ လျှော့မတွက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်အထဲမှာ ပင်ကိုယ်စွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိနေပါတယ်။ ထိုက်သင့်တဲ့အခွင့်အရေးတေွလည်း လက်ထဲမှာရှိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စွမ်းဆောင်နိုင်သမျှ အသုံးချပြီး, ရသမျှအခွင့်အရေးတွေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ထုတ်ကုန်အကောင်းစား မဟုတ်တောင် ပင်ကိုယ်ထက်ညံ့တဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုမဖြစ်ရအောင် ပညာရေးမှာ ဆိုရင်လည်း ပညာရေးမှာမို့ ၊ အလုပ်အကိုင်မှာဆိုရင်လည်း အလုပ်အကိုင်မှာမိုလို့ ရှိသမျှ resource တေွကို အကောင်းဆုံးအသုံးချပြီး ကြိုးစားသွားရမှာပဲလေ။ ဒါက ကိုယ့်ရဲ့ Products အစစ်တွေပေါ့။
ဒါတွေအားလုံးက မင်မင် ဆက်စပ်တွေးမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာ ရည်ရွယ်ချက်တိတိပပမရှိပဲ အကျိုးမရှိလုပ်နေမိတာတွေ၊ ကိုယ်နဲ့မကိုက်ပဲ သူများလမ်းအတိုင်းလျှောက်ရင်း ယောင်ဝါးဝါး ဖြစ်နေတာတွေ၊ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်တာတွေကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်တွေနိမ့်ပါးနေကို လူငယ်တွေပြန်လည်ဆင်ခြင်မိနိုင်ရင် မင်မင်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်ပါပြီး။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်…..